MUQDISHO, Soomaaliya - Xildhibaanada wada Mooshinka ka dhanka ah Gudoomiyaha Gollaha Shacabka Maxamed Cismaan Jawaari, ayaa maanta Shir Jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho.
Xildhibaanada oo ay hogaaminayso Khadiija Maxamed Diiriye, Wasiirka Dhalinyarada iyo Ciyaaraha ayaa ugu baaqay Jawaari inuu iscasilo, iyagoo ku eedeeyay inuu ku xad-gudbay Dastuurka iyo Xeerka Baarlamaanka.
Shirka Jaraa'id waxaa kasoo muuqday Sheekh Aadan Madoobe, Afhayeenkii hore ee Baarlamaankii KMG ahaa ee dowladdii Sheekh Shariif iyo Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil, oo isna Wasiir kasoo noqday dowladdii Allah ha u naxariistee Cabdullaahi Yuusuf Axmed.
Khadiija Maxamed Diiriye, oo katirsan Xukuumadda Ra'iisul Wasaare Khayre ayaa sheegtay in sharci darro ay ahayd in Mooshinka Jawaari kasoo gudbiyeen lagu furo ama looga hadlo meel ka baxsan Xarunta Gollaha Shacabka.
Wasiir Khadiija oo kamid ah Xildhibaanada hor-boodaya Mooshinka ayaa Shirka Jaraa'id ku weerartay Shaqsiyada Jawaari, oo wax ka sheegtay aqoontiisa, waxayna cambaareysay hadalkii uu xalay Jawaari ka sheegay Shirka Jaraa'id ee uu ku qabtay Xafiiskiisa.
"Mar hadii la aqbalo Mooshinka cid ka noqon kartaa ma jirto, illaa laga geeyo Gollaha Shacabka, hadii uu mudo 15 maalmood uu ku gaari waayo Mooshinka 184 Xildhibaan, Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari waa gudoomiyaha Gollaha Shacabka, hadii uu helo codka saddex meelood labo meel, Gollaha Shacabka wuxuu dooranayaa Gudoomiye cusub," ayay tiri Khadiija.
Hadalka Xildhibaanada mucaaradka ku ah Jawaari ayaa kusoo beegmaya xilli maanta uu baaqday Fadhiga Gollaha Shacabka, kaasi oo looga doodi lahaa Mooshinka muranka khilaafka dhaliyay, kaasi oo Beesha Caalamka walaac ka muujisay.